Waxaa nasiib darro ah in maanta Soomaali oo ab iyo isir u leh diintan Islaamka ay ka soo daahiraan nin(Maxammad shiikh Xuseen - Eeg: http://www.geocities.com/qatarta/ | Eeg QOraalkii C/Waaxid) xambaarsan fikrado qalaad oo ka soo horjeeda diinteenan macaan ee Islaamka, waliba sida ka muuqata doodo dhawr ah oo uu soo jeedshay sheekhan waa kuwo hadafkoodu uu ka qoto dheeryahay inta inoo muuqato.
Hadafka ugu wayn ee ka dambeeya doodihiisa waa sidii shacabka Soomaaliyeed looga shaki galin lahaa diintooda gaar ahaan axaadiista nabigooda suuban salallaahu calayhi wasalam.
Waxba igama dhinteen hadii uu odagu doodiisa ku salayn lahaa aqoon iyo cilmi si ay u sahlanaato jawaabtiisa waxaase muuqata inuu taa ka fara maranyahay oo uu soo tabiyo oo kali ah tashwiish iyo hadalo aan sal iyo baar toona lahayn, waxaase mahad Eebe ah in mar waliba ay noolyihiin dad aqoon u leh diinta oo xil uu ka saaranyahay sidii ay uga yurayn lahaayeen inta hagarta la maagan ee quluubtooduna iilatay.
Intaa ka dib hadii aan usoo laabto shubhadan kale ee odagu ka sharqamiyay ee uu ku tilmaamay(DAJAAL CAWAR) been lagu soo daray diinta waxaan ka oran lahaa hal shay oo ah:- Beeninta Dajaal waxaad daliil ka dhigatay xadiithka Tamiim ee fatima bint qays Allaha ka raali noqdee waxaanad ku tilmaantay inuu ka mid yahay axaadiista aaxaadka.
Waxaa halkaa ka muuqata in Eebe jahli kugu masruufay adoo da'ah, micnaha axaad iyo mutawaatirna uusan ku dhacsanay, doodaha culumada ee axaadiista axaadkana aadan waligaa maqal iska daa inaad barataye, maxaa la aqbalaa axaadiista maxaanse la aqbalina ay tahay martabo ay masaafo idiin dhaxayso. Waxaase la yaab leh adeerow maxaa adiga kaa galay axaadiista nabigeena suuban sallallaahu calayhi wasalam! sow ma ogid in shacabka Soomaaliyeed ay ogyihiin inaadan guud ahaanba rumaysnayn axaadiista nabigeena suuban sallallaahu calayhi wasalam.
Waa maxay faa'iidada kuugu jirta kala qaadqaadka axaadiista iyo beeninta badiihiyaadka Islaamka, sawse dhab ma ahan sidaan horay u xusay in hadafkaagu yahay sidii aad shaki u beeri lahayd oo qura. Baroortu adeer orgiga ka wayn, hada ka hor waxaad somaliweyn.com ku fidisay maqaal aad ugu magac dartay "Axaadiistu ma waxyibaa" waxaanad si cad u beenisay in axaadiistu aanay ahayn waxyi Eebe. Hadaba maxaad hadana mar labaad intaad huwato maro zuur ah aad u kala falanqayn qaybaha axaadiista nabigeena suuban sallallaahu calayhi wasalam. Markii aad u fadwootay ninkii wahmiga ahaa ee su'aasha ku soo waydiiyay waxaad dulmi kaa buuxa awgi tiri"Dhamaan culumada madaahibtu waa ehelo naar maxaa yeelay waxay khilaafeen kitaabka Eebe" hadaadan adeerow gaarin da'dii Alzheimerka waxaad garan lahayd kitaabka aad u doodayso inuu meelo badan kugu farayo raacida nabiga sallallaahu calayhi wasalam iyo in sunadu tahay waxa kali ah ee cadeeya oo bayaansha
Qur'aanka. Intaa ka dib sida aan ka warqabno waxaad ku andacootaa inaad rumaysantahay Quraanka oo kali ah hadaba maadaama aad tiri markaad beeraysay shakiga "Meel aan aduunka la marin ma jirtee jaziirada uu dajaal joogo aaway...." bal ka waran arrinka YA'JUUJ WAMA'JUUJ saw Quraanka laguma xusin? sawse axaadiis aan aaxaad ahayn luguma cadayn inay jiraan ooy meel dhulka ka mida ku xabisanyihiin inkastoo aadan gabigoodba rumaysnayn? aawaye adeerow hadaad dhulkoo idil iktishaaftay? mise kuwana waa been Qur'aanka lagu abuurtay? halkaa waxaa kaaga muuqata in aqoonteena xitaa dhulkan aynu ku noolnayah ay xadidantay intii uu Eebe ina garansiiyo un mooyee. Hadaan isleeyahay qoraalkaygu wuu ku anfacayaa waxaan soo sardiyi lahaa daliilo intan ka badan oo leh manquul iyo macquulba hayeeshee meeshuna meesheedi maahan madaxeedina kuguma yaal ee ujeedaydu waxay ahayd oo kali ah inaan shacabka u adkeeyo beentaada kaana xayuubiyo magaca aad u huwatay si aad u khalado.
Dajaal waa magac uu nabigeenu sallallaahu calayhi wasalam siiyay qof kasta oo beenlow ah waxaanan ka baqayaa inaad mid ka mida noqoto adigoo waliba da'daan arkay ku jira. Ogow markasta oo shaydaankaagu ku soo afuufo si aad ula shir tagto qoraal kale oo qariib ah inaad is bari doonto in badan oon horay ula socon xumaantaada waxaanse kugula talin lahaa waad ambataye soo laabo sidii ibliis waxaad galaafato un ha ka fikirine.
WQ Faysal Cali Ciise.